Xarunta Ashine R&D waxaa ka go'an inay shiiddo oo tirtirto tikniyoolajiyadda waxayna la shaqaysaa Jaamacadda Sichuan, Jaamacadda Xiamen, iyo macallimiin ka socota Mareykanka. Tan, Ashine waxay awood u leedahay inay siiso alaabo tayo sare leh si joogto ah waxayna leedahay awood wanaagsan oo hal-abuurnimo farsamo si ay u xalliso dhibaatooyinka kala duwan ee shiididda dhulka iyo nadiifinta macaamiisha.
Iyada oo leh qiimaha ugu sarreeya ee badeecadda tayada joogtada ah, aaminaadda iyo isku -halaynta la -hawlgalayaasheenna, iyo R&D -da xooggan iyo hal -abuurnimada, waxaan si dhab ah u rajaynaynaa inaan sii wadno shaqada iyo isku -xidhka xiriirka wada -shaqayneed ee lala -hawlgalayaasheenna caalamiga ah.
Ashine waxay ka dhex muuqataa warshadahaan qalab tayo sare leh, kooxdayada R&D waxay hubisaa in Ashine ay leedahay awood ay kaga hadasho sheyga laftiisa. Kooxda R&D ee Ashine waxay u samaysaa saldhigga horumarka adag ee shirkadda si ay u soo bandhigto joogtaynta badeecadaha, isbeddelka suuqa, iyo baahiyaha macmiilka.
Birta Ku Xidhan Dheemannada Shiidi Kara, Trapezoids Kabaha Shiidi Dheemanka, Kabaha shiidi la taaban karo, Kabaha Shiida Dheemanka, Kabaha Shiidi PCD, Suumanka Nadiifinta La -taaban karo,